किन आकासियो सुनको मूल्य ? – " सुलभ खबर "
काठमाडौँ । आज मंगलबार अमेरिकी डलरलगायत केही देशको विनिमयदर घटेको छ।आज नेपाल राष्ट्र बैँकले १
काठमाडौं – आइतबार अमेरिकी डलरसहित अन्य केही देशको विनिमयदर घटबढ भएको छ । आज नेपाल
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज स्थिर रहेको छ । शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला
काठमाडौँ । आज नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको भाउ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका
सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा अहिलेसम्मकै धेरैले घट्यो, चाँदीको भाउ कति ?
काठमाडौं । सुनको मूल्य बिहीबार एकैदिन तोलाको ९ सय रुपैयाँले घटेको छ । बुधबार ९७
काठमाडाैं, १ असाेज । बजार अनुगमन हुन थालेपछि प्याजको मूल्य घटेको छ । बुधबार प्रतिकेजी